अटिभन बनाम ज़्यानाक्स: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
चेकआउट कम्पनी कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार स्वास्थ्य औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार भारी खेल समुदाय औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण मनोरञ्जन
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> अटिभन बनाम ज़्यानाक्स: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
अटिभन बनाम ज़्यानाक्स: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
अटिभन (लोराजेपाम) र जान्याक्स (अल्प्राजोलम) दुई पर्चा औषधि हुन् जुन चिन्ताको उपचारको लागि संकेत गरिएको छ। दुबै औषधिहरू ब्रान्ड वा जेनेरिकमा उपलब्ध छन्। तिनीहरू भनिने औषधीहरूको समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ बेंजोडाइजेपाइन , जुन CNS मा काम गर्दछ (केन्द्रीय स्नायु प्रणाली)। तिनीहरू गामा-एमिनोब्युटेरिक एसिड (GABA) भनिने न्युरोट्रान्समिटरका लागि रिसेप्टर्सहरूमा गतिविधि बढाउँदै काम गर्दछन्। यो गरेर, बेन्जोडियाजेपाइनले एक आरामदायी र शान्त प्रभाव पैदा गर्दछ र सुत्ने बेलामा निद्रा बढाउन मद्दत गर्दछ।
अटिभन एक घण्टा भित्र काम सुरू गर्दछ, र प्रभाव आठ घण्टा सम्म रहन्छ। झ्यानाक्स एक घण्टा भित्र काम गर्न थाल्छ, र प्रभावहरू करीव पाँच घण्टासम्म (विस्तारित-रिलीज संस्करण लगभग ११ घण्टा सम्म रहन्छ)। दुबै औषधिहरूको आधा जीवन हुन्छ (औषधिको मात्रा आधा घटाउन लाग्ने समय) लगभग १२ घण्टाको हुन्छ। दुबै औषधीहरू चिकित्सकीय रूपमा बेंजोडायजेपाइनहरू भनेर चिनिन्छन्; जे होस्, तीसँग केहि उल्लेखनीय भिन्नताहरू छन्, तल उल्लेखित रूपमा। दुबै औषधि नियन्त्रण पदार्थहरू र वर्गीकृत गरीएका छन् अनुसूची IV ड्रग्स ।
अटिभन र झ्यानाक्स बीचको मुख्य भिन्नता के हुन्?
एटिभन र झ्यानाक्स, दुबै बेंजोडाइजेपाइनको रूपमा वर्गीकृत छन्, दुबै ब्रान्ड नामको साथै जेनेरिकमा पनि उपलब्ध छन्। अटिभनको जेनेरिक लोराजेपाम हो, र जेनाक्सको जेनेरिक अल्प्रजोलम हो। अटिभन ट्याब्लेट फारम, ईन्जेक्शन, र मौखिक ध्यानमा उपलब्ध छ। Xanax दुबै तात्कालिक रिलिज र विस्तारित रिलीज ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ, साथै मौखिक केन्द्रितको रूपमा। अटिभन १२ बर्ष र माथिका बच्चाहरूमा प्रयोग गरिन्छ; Xanax वयस्क मा प्रयोग गरीन्छ। दुबै औषधिहरू छोटो अवधिको लागि प्रयोग गर्नका लागि लक्षित छन्, तर प्रायः बिरामीहरू डाक्टरको निर्देशनको आधारमा र सावधानीपूर्वक अनुगमनको साथ दीर्घकालीन जारी राख्छन्।
जब कि त औषधि प्रयोग भइरहेको छ, खुराक बिस्तार बढाउनुपर्दछ, र जब औषधि बन्द गरीन्छ, यो बिस्तारै टेपरिंग द्वारा गरिनु पर्छ।
सम्बन्धित: एटिभन विवरणहरू Xanax विवरण
एटिभन र Xanax बीच मुख्य भिन्नता
जेनेरिक नाम के हो? लोराजेपाम अल्प्राजोलम
इंजेक्शन तत्काल रिलीज ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? सामान्य दायरा २ दिन देखि mg मिग्रि विभाजित खुराकमा प्रति दिन हो (उदाहरणका लागि १ मिलीग्राम ट्याब्लेट दैनिक3पटक लिन्छ) सामान्य दायरा ०.55 मिलीग्राम देखि ०.; मिलीग्राम दैनिक times पटक लिन्छ; खुराक फरक हुन्छ
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? छोटो समय; केही बिरामीहरूले डाक्टरको सुपरिवेक्षणमा लामो समय प्रयोग गर्छन् छोटो समय; केही बिरामीहरू डाक्टरको सुपरिवेक्षणमा लामो समयसम्म प्रयोग गर्छन्
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू; १२ बर्ष र माथिका बच्चाहरु वयस्कहरू
अटिभन र झ्यानाक्सद्वारा उपचारित अवस्थाहरू
अटिभन र Xanax दुबै को ब्यबस्थापनमा संकेत गरीएको छ चिन्ता विकार । दुबै औषधिहरू चिन्ताका लक्षणहरूको अल्पकालीन राहत, र डिप्रेसन लक्षणसँग सम्बन्धित चिन्ताको अल्प-अवधि राहतको लागि संकेत गरिएको छ। Xanax पनि आतंक विकार को उपचार को लागी संकेत गरीएको छ, agoraphobia साथ वा बिना। दुबै औषधिहरूका पनि धेरै अफ-लेबल प्रयोगहरू छन्, तल उल्लेखित।
सर्त अटिभन Xanax
चिन्ताको लक्षणहरूको अल्पकालीन राहत हो हो
अवसादग्रस्त लक्षणहरूसँग सम्बन्धित चिन्ताको अल्पकालिक राहत हो हो
पोरिक डिसअर्डरको उपचार, एगोराफोबियाको साथ वा बिना अफ-लेबल हो
आक्रमित बिरामीको द्रुत स्र्णण अफ-लेबल अफ-लेबल
रक्सी निकासी डिलिर्मियम / मदिरा फिर्ता सिन्ड्रोम अफ-लेबल अफ-लेबल
केमोथेरापी सम्बद्ध अग्रगामी मतली र बान्ता अफ-लेबल अफ-लेबल
प्रलोभन अफ-लेबल अफ-लेबल
डिप्रेसन हैन अफ-लेबल
कानमा बजिरहेको अफ-लेबल अफ-लेबल
Ativan वा Xanax अधिक प्रभावी छ?
एक प्लेसबो-नियन्त्रित, डबल-अन्धा अध्ययन गम्भीर चिन्ताका बिरामीहरूको उपचारमा अटिभन र झ्यानाक्सको तुलना गरे। दुबै औषधिहरू प्लेसबो भन्दा बढी प्रभावकारी फेला पर्‍यो, अध्ययनको पछिल्लो हप्ताहरूमा Xanax अलि बढी प्रभावकारी भएको थियो। यद्यपि चिन्ताको लागि दुई औषधिहरूको अर्को अध्ययनले देखायो दुबै औषधि प्रभावशाली हुन , अटिभान थोरै बढी प्रभावकारी भएको साथ।
अर्को अध्ययनले दुई औषधीको उपचारमा तुलना गर्‍यो आतंक विकार र Ativan र Xanax समान रूपमा प्रभावकारी हुन पाए।
तपाईका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी औषधि तपाईको डाक्टरले मात्र निर्धारण गर्नु पर्छ, जसले तपाईको मेडिकल अवस्था (हरू), इतिहास र तपाईले लिनुहुने अन्य औषधीहरूलाई ध्यान दिनेछ।
कभरेज र लागत तुलना अटिभन विरुद्ध Xanax
अटिभन सामान्यतया बीमा र मेडिकेयर पार्ट डी द्वारा कभर गरिएको हुन्छ यसको सामान्य फराकिलो लोराजेपाममा। ब्रान्ड-नाम अटिभन कभर हुन सक्दैन वा उच्च प्रतिलिपि हुन सक्दैन। Lorazepam को एक सामान्य नुस्खे १ मिलीग्रामको tablets० ट्याब्लेटहरूको लागि हुन्छ र pocket २ of in-of-pket का। Xanax सामान्यतया बीमा र मेडिकेयर भाग डी द्वारा कवर गरिएको छ जेनेरिक फार्ममा अल्प्रजोलमको रूपमा। ब्रान्ड-नाम Xanax कभर वा एक उच्च प्रतिलिपि हुन सक्दैन। अल्प्रजोलमको एक सामान्य पर्चे ०. 60 मिलीग्रामको tablets० ट्याब्लेटहरूको लागि हुन्छ र pocket of--को जेबको खर्च। तपाईं जेनेरिक अटिभन वा Xanax मा एकलकेयर कूपन प्रयोग गरेर पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
मानक खुराक # ,०, लोराजेपमको १ मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू # ,०, ०.२ मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू अल्प्राजोलम
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०- $ २। $ ०- $ $
एकलकेयर लागत $ 7- $ 17 $ १०- $ २०
Ativan विरुद्ध Xanax को सामान्य साइड इफेक्ट
Ativan र Xanax का साइड इफेक्टहरू अधिक खुराकमा बढी हुन्छन्। एटिभनको सबैभन्दा सामान्य दुष्प्रभावहरू बेहोरा, चक्कर, र कमजोरी हुन्। Xanax लिने बिरामीहरु प्राय: बेहोश, चक्कर, र कमजोरी को अनुभव गर्छन्।
अन्य साइड इफेक्ट जुन कि दुबैको साथ हुन सक्छ थकान, हल्का टाउको, निन्द्रा, स्मोनेस / मेमोरी कमजोरी, भ्रम, विकृति, डिप्रेशन, उत्साह, आत्महत्या विचार / प्रयास, असंगति, उर्जाको कमी, सुख्खा मुख, कम्पन, आघात / दौरा, चक्कर , दृश्य अस्थिरता (डबल वा धमिलो दृष्टि), अस्पष्ट बोली, कामेच्छा परिवर्तन, नपुंसकता, ओर्गेज्म घटेको, टाउको दुख्ने, कोमा, श्वसन डिप्रेशन, एपनिया / निन्द्रा श्वास लाग्ने बानी, अवरोधक फुफ्फुसीय रोगको बिरामी, र जठरांत्र (जीआई) लक्षणहरू जीवाणु सहित , कब्ज, वा पखाला।
अन्य साइड इफेक्ट हुन सक्छ। साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूचीको लागि स्वास्थ्यसेवा पेशेवरसँग परामर्श लिनुहोस्।
Sedation हो १.9..9% हो -१-77%%
चक्कर हो 9.9% हो १.8--30०%
कमजोरी हो 2.२% हो 7-7%
स्रोत: डेलीमेड (एटिभन) , डेलीमेड (Xanax)
Ativan विरुद्ध Xanax को ड्रग अन्तर्क्रिया
बेन्जोडियाजेपाइनहरू, जस्तै अटिभन र झान्याक्सलाई ओपिओइड पेन्किलरहरूको साथ लिनुहुँदैन, श्वासप्रश्वासको उदासीनता, र ओभरडोजको सम्भावित जोखिमले गर्दा सम्भवतः मृत्यु हुन्छ। यदि कुनै अन्य संयोजन सम्भव छैन भने, बिरामीले सब भन्दा कम सम्भावित खुराकमा र छोटो अवधिको लागी ड्रग्स प्राप्त गर्नुपर्दछ, र नजिकबाट निरीक्षण गर्न सकिन्छ। बेन्जोडियाजेपाइनहरू अन्य सीएनएस डिप्रेशनन्टहरू जस्तै अल्कोहल, एन्टिसाइकोटिक्स, एन्टिडिप्रेसन्ट्स, सेडेटिंग एन्टीहिस्टामाइन्स, र एन्टिकोनभल्सेन्ट्ससँग पनि लिनु हुँदैन।
विशेष गरी खतरनाक संयोजन, उपनाम राखिएको पवित्र त्रिएक , एक ओपियोइड (सामान्यतया हाइड्रोकोडोन वा ओक्सीकोन्टिनको एक रूप हो) प्लस बेंजोडाइजेपाइन (सामान्यतया Xanax) प्लस सोमा (क्यारिसोप्रोडल, एक मांसपेशी आराम गर्ने) हो। यी औषधिहरू कहिले पनि एकसाथ निर्धारित गर्नु हुँदैन; यी तीन औषधिको प्रयोगको परिणामस्वरूप धेरै गम्भीर श्वासप्रश्वास उदासीनता, अधिक मात्रा, वा मृत्युसमेत हुन सक्छ।
अन्य औषधि अन्तर्क्रिया हुन सक्छ। औषधी अन्तरक्रियाहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास अटिभन Xanax
पर्कोसेट (अक्सीकोडोन / एसिटामिनोफेन)
कोडिनको साथ टायलनोल (एसिटामिनोफेन / कोडिन) ओपियोड्स हो हो
सिम्बल्टा (डुलोक्सेटिन) Antidepressants हो हो
लिओरेसल (ब्याक्लोफेन) मांसपेशी आराम हो हो
Depakote (Divalproex सोडियम)
Topamax (topiramate) एन्टिकोनभल्सेन्ट्स हो हो
बेनाड्रिल (डिफेनहाइड्रामिन) Sedating antihistamines हो हो
Clozaril (Clozapine) एन्टिसाइकोटिक्स हो हो
बेनिमिड (प्रोबेनेसिड) Uricosuric हो हैन
Sporanox (itraconazole) Azole antifungals हैन हो
Lo-Loestrin विश्वास मौखिक गर्भ निरोधक हैन हो
अटिभन र Xanax को चेतावनी
अटिभन र झ्यानाक्ससँग धेरै त्यस्तै चेतावनीहरू छन्। दुबै ड्रगहरू बक्सिed चेतावनीसहित आउँदछन् जुन एफडीएलाई आवश्यक पर्ने कडा चेतावनी हो। अटिभन वा झान्याक्स जस्ता बेन्जोडियाजेपाइनहरू ओपीओइड पेन्किलरहरूको साथ संयोजनमा प्रयोग गर्न मिल्दैन चरम बेहोरापन, गम्भीर श्वासप्रश्वासको उदासी, कोमा, वा मृत्युको जोखिमको कारण। यदि संयोजनलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न भने, बिरामीले सबैभन्दा छोटो समयको लागि सबैभन्दा कम खुराक लिनुपर्दछ र नजिकबाट अनुगमन गरिनु पर्छ। बिरामीहरूले ड्राइभ गर्ने वा प्रभावहरू थाहा नभएसम्म मेशिनरी अपरेट गर्नु हुँदैन।
दुबै औषधि को लागी अन्य चेतावनी मा समावेश छ:
बेन्जोडियाजेपाइनले शारीरिक र मनोवैज्ञानिक निर्भरता निम्त्याउन सक्छ - जोखिम अधिक मात्रा, अधिक प्रयोगको अवधि, वा लागुपदार्थ वा मदिरा दुरुपयोगको इतिहासको साथ अधिक हुन्छ। यदि तपाइँ बेन्जोडियाजेपाइन लिनुहुन्छ भने, औषधि लिईए अनुसार मात्र लिनुहोस्।
बेन्जोडियाजेपाइनहरूलाई छोटो अवधिको लागि प्रयोग गरिनुपर्दछ, र जब बन्द हुँदैछ, ड्रग फिर्ता फिर्ताको लक्षणहरू जोगिन बिस्तारै टेपर गर्नुपर्दछ। फिर्ता लक्षणहरूमा दौरा, साथै आन्दोलन, भ्रम, छिटो मुटुको धड्कन, चक्कर, र अन्य लक्षणहरू जस्ता धेरै लक्षणहरू समावेश हुन सक्छ।
दौरा विकार भएका बिरामीहरू फिर्ताको लक्षणहरूको लागि बढी जोखिममा छन्।
डिप्रेसन भएका बिरामीहरूमा आत्महत्याको जोखिम हुन्छ। डिप्रेसनका बिरामीहरूलाई एन्टिडेप्रेसन्टको साथ पनि उपचार गरिनु पर्छ र राम्ररी निगरानी गर्नुपर्छ।
बेन्जोडियाजेपाइन्स बिरामीहरुमा सावधानीका साथ बिरामी श्वसन समारोह (सीओपीडी, स्लीप एपनिया) को उपयोग गर्नुपर्दछ।
सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस् र गम्भीर हेपाटिक अपूर्णता र / वा एन्सेफलोपथी बिरामीहरूमा कम खुराक प्रयोग गर्नुहोस्।
Xanax लाई केहि अतिरिक्त चेतावनी छ:
पनिक डिसअर्डर भएका बिरामीहरूले अक्सर झान्याक्सको अधिक डोज प्रयोग गर्छन्, त्यसैले निर्भरताको उच्च जोखिम पनि हुन सक्दछ।
बिहान सबेरै चिन्ता वा डोजको बीचमा चिन्ताका लक्षणहरू प्यानिक डिसअर्डर भएका बिरामीहरूमा देखा पर्‍यो। यी अवस्थाहरूमा, यो सिफारिश गरिन्छ कि औषधी साना मात्रामा दिइन्छ, अधिक बारम्बार, समान कुल दैनिक खुराक बढाउँदै।
Ativan वा Xanax गर्भावस्था मा प्रयोग गर्नु हुँदैन; दुबै औषधिहरू गर्भावस्था कोटि D को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ, जसमा भ्रूणमा जोखिम छ। यदि तपाईं अटिभन वा Xanax लिईरहनु भएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुभयो भने, तुरुन्तै तपाईंको डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस्।
ट्यूम्स लाई काम गर्न कति समय लाग्छ?
दुबै औषधिहरू यसमा छन् बियरको सूची (ड्रगहरू जुन उमेर वयस्कहरूमा अनुपयुक्त हुन सक्छ)। वृद्ध वयस्कहरूले बेंजोडाइजेपाइनप्रति संवेदनशीलता बढाएका छन् र अटिभन वा झ्यानाक्स प्रयोग गर्दा वृद्ध वयस्कहरूमा संज्ञानात्मक कमजोरी, प्रलोभन, झरना, भंग, र मोटर सवारी दुर्घटनाको बढि जोखिम छ।
एटिभन बनाम झ्यानाक्सको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
अटिभन, यसको सामान्य नाम, लोराजेपाम द्वारा पनि चिनिन्छ, बेन्जोडाइजेपाइन औषधि चिन्ताको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ।
Xanax, जेनेरिक नाम, अल्प्रजोलम द्वारा पनि चिनिन्छ, बेन्जोडियाजेपाइन औषधि हो जुन चिन्ता र आतंक विकारको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ।
अटिभन र Xanax उस्तै हो?
दुबै ड्रग्सको धेरै समानताहरू छन्, साथै केहि भिन्नताहरू, जसरी माथि वर्णन गरिए। तपाईंको हेल्थकेयर प्रदायकले निर्णय गर्न मद्दत गर्न सक्छ कि Ativan वा Xanax तपाईं वा एक प्रियको लागि सही छ।
बेन्जोडाइजेपाइन औषधिहरूको अन्य कोटीहरू जुन तपाईंले सुन्नु भएको हुन सक्छ Valium (diazepam), Dalmane (flurazepam), Restoril (temazepam), Klonopin (क्लोनाजेपाम), र Halcion (triazolam)। यी सबै औषधिहरू एफडीएद्वारा अनुमोदित छन्।
Ativan वा Xanax राम्रो छ?
अटिभन र झ्यानाक्स दुबै चिन्ता र अन्य मनोवैज्ञानिक स्थितिको लागि प्रभावकारी छन् र त्यस्तै साइड इफेक्ट, चेतावनी, र औषधि अन्तर्क्रियाहरू छन्। यी मध्ये कुनै एक औषधि तपाईंको र तपाईंको अवस्थाको लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर हेर्न तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
के म गर्भवती हुँदा एटिभन वा झान्याक्स प्रयोग गर्न सक्छु?
अटिभन वा झ्यानाक्स भ्रुण की असामान्यताहरूको कारण हुन सक्छ र गर्भावस्थामा प्रयोग हुनुहुन्न। यदि तपाईं पहिले नै एटिभन र Xanax लिइरहनु भएको छ, र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुभयो भने, निर्देशनको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
के म एटिवान वा Xanax रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
अटिभन वा Xanax को साथ संयोजन रक्सी धेरै खतरनाक हो र यसले श्वासप्रश्वासको उदासीनता, चरम बेहोरा, कोमा, वा मृत्यु पनि निम्त्याउन सक्छ।
Xanax भन्दा Ativan हल्का छ?
अटिभनलाई हल्का रूपमा वर्गीकृत गर्न गाह्रो छ वा छैन; जे होस्, हामीलाई थाहा छ Xanax को एक खुराक Ativan को एक खुराक भन्दा छिटो बन्द लगाउँछ। तसर्थ, Xanax अधिक बार बार Ativan भन्दा अधिक गर्न सकिन्छ।
कुन चिन्ता, Xanax वा Ativan को लागी राम्रो हो?
दुबै औषधीहरू चिन्ताको लागि प्रभावकारी छन्। तपाईको डाक्टरलाई सोध्नुहोस् कि यी औषधिहरु मध्ये कुनै एक तपाइँको लागी ठीक छ, तपाईको मेडिकल ईतिहास र अवस्था (हरू) लाई लिन र तपाईले लिनु भएका अन्य औषधीहरुलाई ध्यान दिदै
Lorazepam र Xanax बीच के भिन्नता छ?
दुबै ड्रग्स, अटिभान (लोराजेपाम) र जान्याक्स (अल्प्राजोलम) चिन्ता र अन्य मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको विभिन्न उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूसँग धेरै समानताहरू छन् र केहि भिन्नताहरू पनि माथि उल्लेख गरिएका छन्।
Ativan एक आतंक हमला रोक्नेछ?
अटिभन चिन्ता विकारको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ र अफिक-लेबल प्रयोग गरी भय विकारहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
के अटिभन एक मादक पदार्थ हो?
अटिभन मादक पदार्थ होइन। यसलाई बेन्जोडियाजेपाइनको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। यो बानी बनाउने हुन सक्छ र दुरुपयोग र निर्भरता को लागि सम्भावना छ, त्यसैले यो धेरै महत्वपूर्ण छ यो निर्धारितको रूपमा लिनु।
चरण5मिर्गौला रोग उल्टाउन सक्छ
एक प्राकृतिक रेचक कि छिटो काम गर्दछ
सामान्य रक्त शर्करा स्तर के हुनु पर्छ?
म कती भिटामिन डी लिनु पर्छ?
जन्म नियन्त्रण कति खर्च लाग्छ